umkhumbi Nesihlanu, elaklanywa 956 "Buzzard" - umchithi "Eyaluzayo". NATO, ubizwa ngaphansi kwegama ikhodi Sovremenny Class Destroyer ezaziwayo. Wabeka ngumbhubhisi kwaba ngo-Ephreli 1987, futhi umkhankaso ngo-June 1990. Imikhumbi ivela Februwari 1992.
Nge kuqale ukwakhiwa okucatshangelwa ukuthi loluhlelo ngumbhubhisi esizayo "Eyaluzayo" abayokhonza lamabutho 192nd lwemikhumbi ku elwandle eliKhulu iPacific, kodwa kamuva lathola isiqondiso webutho Navy phezu ukudluliselwa imikhumbi Baltic Fleet, futhi ngo-1992, ukuthi yilokho kanye okwenzeka. Nokho, ekuqaleni inkonzo wayengekho ngumbhubhisi ngoba Licwathile.
Ngo-Agasti, umkhumbi sauna yalo ivuthe umlilo, indoda wabulawa. Ngaphezu kwalokho, amabhlogo ephezulu imvamisa ashisiwe radar "frigate", kwavalwa ngehlahla ngomlilo indawo yokuhlala futhi ehhovisi eziningana. Ngisho nangaleso sikhathi sigameko aluphelanga. Ngosuku olulandelayo, ukuzibulala ingenye amatilosi.
isivinini Okugcwele phambili!
Nomchithi "Eyaluzayo", ngaleyo ndlela ulunge kangakanani igama layo, wema ukulungisa, ngemva kwalokho ngo-August 1992 wayiswa Baltic Fleet ku 128 Brigade (12 Division rocket imikhumbi). Khona-ke waqonda inkonzo, futhi ngo-1994 wathola ngumbhubhisi-in-Chief of umklomelo Navy. Emalangeni alitjhumi elandelanayo kwaba umchithi "Eyaluzayo" ubephelezelwa ukuvakashelwa British Queen ukuze Petersburg, ngoba yena waklonyeliswa ngesitifiketi udumo kusukela uMongameli we Russian Federation.
Naphezu ukubuyela ngokuphelele ekubhemeni amashwa uma ngumbhubhisi yamila igobolondo e umgqomo umshini lapho wadubula, isevisi baqhubeka ngempumelelo. Ngo-1995, izimfundiso esidlule "Baltops-1995", okuyinto eyenziwa ngumbhubhisi kahle "Eyaluzayo", ithemba Baltic Fleet nokusekelwa. Khona-ke wasuka Denmark ukuhamba kanye US "Taylor" kanye Danish "Hvidbornerom" we Kattegat. Kwabe umsebenzi umkhumbi isiJalimane, yimpumelelo ezingontuluntulu. On imiphumela 1995 ngumbhubhisi BF "Eyaluzayo" itholwe enkompolo emkhunjini engcono.
impumelelo ngonyaka odlule olwenze iwuhlelo waba umbhubhisi ezimfundisweni "Baltops-96." Njengengxenye lezindiza isiteleka iqembu ngumbhubhisi "Eyaluzayo", isithombe okumelelwe lapha, wenza iqoqo ukumasha, ukuzivocavoca yayiqhutshelwa ukusekela iqembu ukuphila kokubili emanzini nasezweni, bese ukuzivikela, eyayihunyushwe hit eziyisikhombisa Okuqondiwe-imicibisholo. Ngokusho imiphumela efika umklomelo uMphathi Navy wezikhali nokulungiselela.
Ngonyaka olandelayo, imfundiso saqala ngo-June, lapho umchithi "Eyaluzayo" (sithombe kulesi umsebenzi ezithakazelisayo kakhulu) wasebenza ngwenya Polish nengxenye iziqephu amathathu ezinkulu izivivinyo. Ngokwe-anti-aircraft kanye wezikhali ukulungiselela wathatha indawo yokuqala Navy ekupheleni konyaka. Lokho ngumbhubhisi eksadrenny ehlobo wavakashela Kiel, Plymouth, Zeebrugge, Den Helder, lidlule eziyinkulungwane namakhulu amathathu nautical miles. Futhi emva uzokuba ukulungisa izinyanga ezimbili (ifektri "Amber").
Ngo-May 1999, umchithi kwaba e Stockholm, lapho kuqala wasebenza wokutakula umsebenzi, kuhambisana abaseSweden, bese bevula isizini uhambo, ngesikhathi umkhumbi wavakashelwa abantu ecishe ibe yizinkulungwane ezintathu, eliholwa uNgqongqoshe wezokuVikela Bjorn von Sydow. NATO ubudlova eYugoslavia uvinjelwe ukwenza amalungiselelo eminye, kanjalo eJalimane, Denmark kanye Poland, "Eyaluzayo" Ngalesi sikhathi akakavakasheli.
Ngo-October, ebhodini wavakashela uMongameli waseBelarus, umkhumbi iqhaza ekwenzeni missile firings. Ngo-2001, futhi aphethwe umzimba "Baltops" lapho "Eyaluzayo", umchithi wazalwa ngo-1990, seliphinde iwine kwasekuqaleni, okungcono ishaya okuqondisiwe zasemoyeni. Kufanele kuqashelwe ukuthi umkhumbi Russian Navy lesithathu endala, abadala izindiza kuphela yenethiwekhi "Admiral Ushakov" nomchithi 'ukuphikelela ".
Spring 2004 ethulwa abathanda iqembu ukungqongqoza kwakhe kuqala: lapho ngumbhubhisi ukubeka kuze kube selwandle, yahlatshwa ilahlekile ijubane futhi kwakufanele ayibuyise zakhe. Lesi sikhathi, iqembu uqobo eye yabuyisela ukulungela lobuchwepheshe emkhunjini, bese ngilanda ukuya olwandle kuze 2009 (kukhona ulwazi ezahlukene, kukhona ulwazi ngesikhathi sokugcina kwaba e th 2007).
Destroyer noma nini olwenziwa ezingontuluntulu futhi njalo kwaba nemiphumela emihle. Noma kunjalo, kwenziwa isinqumo, umchithi "Eyaluzayo" ukwesulwa by oda ophikweni olunamandla lomyali. izinjini Main naye idluliselwe "ngobudlova" njengoba kwakunjalo njengoba iwuhlelo ukuzilolonga nezikhulumi umkhankaso Europe.
Ngo cindezela 2012 no-2013 eziningi ishicilelwe zonke izinhlobo ulwazi ezingaqinisekisiwe, wathi ngisho ukuqala umsebenzi ukubuyiselwa umkhumbi - kwezikhali electromechanical kanye itilosi missile kanye wezikhali izikhali futhi imishini yezokuxhumana, sinethemba lokuthi ngo-2015 uyovuka ukuze Destroyer "Eyaluzayo "okuzokwenza ukuqedela ukuthuthukisa.
Nokho, Okwamanje, umchithi kuyinto umkhumbi ukuqeqeshwa umile, esiqeqesha abasebenzi ngoba imikhumbi nenhlanhla kakhulu futhi yesimanje aseBaltic Fleet. Ngisho induna electronics iqembu nge "enzima" kwenza iKhwalifikheshini ngakolunye - ukugijima - imikhumbi, okuyinto abasisiwe, futhi ekhaya eqondisa ibandulo labaSebenzi asolwandle izisebenzi amasevisi yonke Baltic Fleet.
Nakhu namuhla ngumbhubhisi "Eyaluzayo": 620 - inombolo ebhodini. Ima ku-dock ye-Baltic Shipyard "Yantar" futhi kuncike ukuguqulwa. Kuyini lokhu? Lokhu ukuguqulwa. Ezezindlu ke ayobekwa uphawu, ukuze bakwazi ukusingatha ntanta ngaphandle nezisebenzi eziningi unomphela.
Nomchithi "Eyaluzayo 620" (izithombe ethulwa esihlokweni), elingenalo imiphini futhi ophephela, walondoloza futhi anemibala, isikhathi esithile kuzoba semikhumbi. Yisiphi isenzakalo esingakabonakali esizolandela? Kukhona kokuqagela ukuthi uyoba ucezu Museum.
Amathemba Ngokuzayo afiphele. Kwaphela isikhathi eside awusebenzi ukuya olwandle ngumbhubhisi "Eyaluzayo 620". Isithombe ngenhla likhombisa amashuni iqhwa pier futhi intambo, okuyinto, ezibonakala phakade ngumbhubhisi eboshelwe emhlabathini.
Noma kunjalo, amatilosi, siqala mfushane, kuso usasebenza ekuseni liphuma ifulege futhi Jack. Kukhona njalo lungisa, futhi upende olusha. Ngakho umkhumbi ngumbhubhisi kuyinto inqolobane lobuchwepheshe, futhi uma ngokungazelelwe kuyadingeka, uzokwazi ukubuyela emsebenzini.
Nomchithi "Eyaluzayo" akulona ngempela lapho esephumule, ke kungaba okuphambene negama layo. It evakashela izintatheli ngisho Blogger. Vakashela yempi - injabulo enkulu, olungena abantu civil hhayi kaningi. Omunye uhambo eyayihlelwe eMnyango Wezokuvikela, wayalwa nje umchithi "Eyaluzayo", umbiko ekuhambeleni ngesithakazelo esikhulu ukufunda izinkulungwane eziningi zabantu.
Kumila, okuyinto wabeka ngumbhubhisi, itholakala Kaliningrad, ngisho ngokuqondile kakhulu - ku aseBaltic nasengxenyeni edolobheni kakhulu entshonalanga yezwe. Kuze 1946, yena waba okuthiwa Pillau, futhi kwaku base-German asolwandle, eye bagxila cishe zonke German ngwenya imikhumbi. Manje Russian Navy isizinda, okuyinto esemqoka e oLwandle iBaltic.
Lokho Blogger isaha
oyisizukulwane sesithathu ngumbhubhisi - "Eyaluzayo" - wabingelela izivakashi ngezandla ezifudumele. Bakhandwa esikunika uhambo, lapho bezwa ukuthi umkhumbi sokuqala salolu chungechunge - "Modern" - sethulwa ngo-1981 futhi waba owokugcina - ngo-1992. Amabili nambili emkhunjini sabekwa, manje kukhona eziyisishiyagalolunye kuphela, kuhlanganise emine ukukhanda noma egciniwe ngokuthi "Eyaluzayo".
Kugcine phuma ukuze kolwandle senziwa eminyakeni emithathu edlule manje - bese bebeka ukulindela noma kuhlelwe yesondlo noma ukuthuthukiswa. Naphezu kweqiniso lokuthi lo mkhumbi manje egciniwe, engazange saphela agcwele ukulwa iyunithi, okuyinto has a encane kepha iqembu. Abagibele "Eyaluzayo," njengokungathi anqobe amasosha, shining izinkanyezi ezintathu omkhulu. Lokhu kusho ukungakwamukeli Ngishoné imikhumbi isitha, futhi imiklomelo etholakele umlawuli omkhulu.
Umkhumbi obuphelele - 156,5 amamitha, kuba ngaphezu kwesigamu obuphelele ibanga elilingana nenkundla kanobhutshuzwayo, ububanzi "Eyaluzayo" - 17 amamitha. ezingu-Amathathu ngumbhubhisi ungahamba olwandle autonomously - ngaphandle kokufaka emachwebeni of ukudla, amanzi nophethiloli. A isivinini phezulu engaba ngamashumi ayisithupha nambili amakhilomitha ngehora (33.4 ifindo).
Kukholakala ukuthi oyedwa, kepha iphutha elikhulu bemikhumbi yethu esinye isitsha design isigaba ukukhethwa ukufakwa kubhayela futhi ophephela. Negesi ophephela isitshalo, uthi, kungaba ngcono. Nokho, kulesi sikhundla, "kusho Eyaluzayo" ngezinye izikhathi kungcono nonamandla kunawo wonke analogue emhlabeni. In the ukungabikho ikhava emoyeni nomchithi iphrojekthi emva ukukhathala yazo zonke imicibisholo anti-umkhumbi kuyoba inkosi isimo ngokumelene yimuphi umkhumbi ebusweni, wonke amazwe naleso sizukulwane.
Kuhlaba umxhwele ngokukhethekile ngumbhubhisi izingalo: ezimbili "iSiphepho" (anti-aircraft missile izinhlelo), okungase hit okuhloswe emoyeni endaweni engamamitha amakhilomitha kuze kube nanhlanu; amabili namabhuzu okusheshayo-izibhamu (130 amamilimitha angu osezingeni) ukuthi "esephimisela" amathani ayisithupha metal ngomzuzu owodwa; eziyisithupha-barreled othomathikhi tridtsatimillimetrovye wezikhali amayunithi ngenani izingcezu ezine (AK-630M) ... Abazibonele zithi shot wakhe wokugcina usike metal like ibhotela.
Kodwa kukhona futhi anti-umkhumbi izikhali. Lokhu ezimbili ezine iziqhumane "Mosquito" (eyodwa namashumi ayisikhombisa amakhilomitha - yokusebenza ububanzi). Bhá cruise ezicitshwayo ngu 99% hit olunembile wonke amatshe ebusweni ngisho nalapho bahileleke ukuphazamiseka. Kusukela usongo amanzi has a ngumbhubhisi ukuzivikela. Lawa amabili namabhuzu torpedo amashubhu, bombomota ezimbili namarokhethi, okwami wesitimela uhlelo isithiyo. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi iyiphi Duel ngqo isitha wempi ngumbhubhisi "Eyaluzayo" win, ngisho kuhlanganise yempi baseMelika - zakamuva, kwesizukulwane sesine.
Ngo sokuthula, amatilosi ngumbhubhisi kukhawulwe - abantu 296 kuphela, kodwa ngenxa kanembeza, lesi sibalo lande laba ngu-358, kuhlanganise 25 amaphoyisa kanye 48 amaphoyisa. Ezinye izindaba zika-team - amatilosi, ikhanda nsuku zonke. Hhayi ngoba noma yini embi babe. Vele iningi lamadoda inkonzo yezempi, okungukuthi ngonyaka, njengoba nje emasosheni Army. Ezikhathini zaseSoviet ngoxhaxha Kwakungafanele ngisho ezimbili, kodwa zonke iminyaka emithathu. Futhi wayeqinisile.
Unyaka izimpukane ngokushesha okukhulu, futhi ochwepheshe baqeqeshiwe ngokushesha okukhulu. imikhumbi Modern, eziyinkimbinkimbi lempi ikakhulukazi ngobuchwepheshe. Ngisho insizwa abahlakaniphe kakhulu ngokulambisa isikhathi ukufunda ukuthi kufanele uthanda iza demobilization. okukhethekile Military neze kuluthola. Ufuna amatilosi ngenkontileka. Kanjani, isibonelo, saboshelwa eduze Sentry "Yaroslav the Hlakaniphile" owayejwayele uya olwandle.
Uma kunjalo, naphezu izibikezelo silahle ithemba, "Eyaluzayo" uzoya ngcono ke le nkinga uzonyamalala ngoba iqembu azokusizana abasebenzi professional. Noma kunjalo, umkhumbi kuyinto ephawulekayo ukuthi bangaki izikhonzi, omongameli abamfonele ebhodini, ngisho Queen of England nase Kunyatheliswa filipp, uMbusi Edinburgh kwesokunxele Autographs yabo encwadini izivakashi ohloniphekile.
wardroom Cosy ophethe izinto eziyizikhumbuzo eziningi nazo zonke izinhlobo zezinsimbi amagugu, ngofuzo iqembu ekhazimulayo umchithi "Eyaluzayo". Lokhu umkhumbi yayingase ibizwe ngokuthi edume: izenzakalo eziningi kangaka okwakwenzekile ekuphileni kwakhe, kukhona okuthile ukukhumbula, futhi bakutshele kukhona. Futhi uchungechunge izinhlamvu ongasoze walibaleka, efana eshaweni ukuzola "Eyaluzayo" ikati ithule unflappable womkhumbi, Tyoma ogama lakhe.
Isikhathi Abavakashi. Mystic Noma Yiqiniso?
Ukuxuba iyunithi ngesandla. Uzotshala kanye ukuxuba iyunithi: isimiso ukusebenza